Uma unesimo esingazinzile, esiguquguquka njengomoya noma imvula, uma ungakwazi ukulokhu uqhubekela phambili, khona-ke induku Yami ngeke isuke kuwe. Lapho kubhekanwa nawe, lapho isimo siba sibi ngokwengeziwe, ushushiswa ngokwengeziwe, uthando lwakho lukaNkulunkulu lwanda ngokwengeziwe, futhi uyayeka ukubambelela ezweni. Ngaphandle kwenye indlela, uza Kimi, futhi uzuza amandla akho kanye nokuzethemba. Nokho, ezimweni ezilula, ubuzohamba ngokudideka. Kufanele ungene kahle, ukhuthale futhi ungabi ngongenzi lutho. Ngeke uzanyazanyiswe muntu futhi noma yini kunoma yisiphi isimo, futhi awukwazi ukuthonywa ngamazwi anoma yimuphi umuntu. Kufanele ube nesimo esizinzile, futhi noma abantu bangathini, uyokwenza ngokushesha lokho okwazi kuyiqiniso. Kufanele ube namazwi Ami asebenza ngaphakathi kuwe, kungakhathaleki ukuthi ubhekene nobani; kufanele ukwazi ukuma uqine ebufakazini bakho Ngami futhi ukhombise ukucabangela imithwalo Yami. Awukwazi ukudideka, uvumelane ngobumpumputhe nabantu ngaphandle kokuba neyakho imiqondo, kodwa kunalokho kufanele ube nesibindi sokuma futhi uziphikise izinto ezingaveli Kimi. Uma wazi ngokucacile ukuthi kukhona okungalungile, kodwa uthule, khona-ke awuyena umuntu owenza iqiniso. Uma wazi ukuthi kukhona okungalungile bese usonta isihloko, kodwa uSathane uvimba indlela yakho—ukhuluma ngokungenamthelela futhi awukwazi ukubekezela kuze kube sekugcineni—khona-ke usaphethe uvalo enhliziyweni yakho, futhi ngabe inhliziyo yakho ayisagcwele imicabango evela kuSathane?
Uyini umnqobi? Amabutho amahle kaKristu kufanele abe nesibindi futhi athembele Kimi ukuze aqine ngokomoya; kufanele alwele ukuba ngamabutho futhi alwe noSathane kuze kube sekufeni. Kufanele uhlale njalo uphapheme, futhi kungakho ngikucela ukuba ubambisane nami ngenkuthalo ngazo zonke izikhathi futhi ufunde ukusondela Kimi. Uma, noma ngasiphi isikhathi futhi kunoma yisiphi isimo, ukwazi ukuhlala uthule phambi Kwami, ulalela inkulumo Yami futhi unaka amazwi nezenzo Zami, khona-ke ngeke unyakaziswe futhi usale. Konke okwamukela kusuka ngaphakathi Kimi kungenziwa. Wonke amazwi Ami aqondiswe esimweni sakho. Ahlaba inhliziyo yakho, futhi noma uwaphika ngomlomo wakho, awukwazi ukuwaphika ngenhliziyo yakho, futhi uma uhlolisisa amazwi Ami, uyokwahlulelwa. Ngamanye amazwi, amazwi Ami ayiqiniso, ukuphila, indlela, nenkemba ebukhali esika nxazonke, enganqoba uSathane. Labo abaqonda futhi abanendlela yokwenza amazwi Ami babusisiwe, futhi labo abangawenzi bayokwahlulelwa ngokungengatshazwe; lokhu kungokoqobo kakhulu. Manje, ukwahlukahlukana kwalabo engibahlulelayo sekwenziwe kwaba banzi. Ngeke ngahlulele phambi Kwami kuphela labo abangaziyo, kodwa labo abangakholwa Kimi nabazama ngakho konke ukumelana nokuphazamisa umsebenzi woMoya oNgcwele bayokwahlulelwa nabo. Bonke labo abalandela izinyathelo Zami phambi Kwami bayobona ukuthi uNkulunkulu ungumlilo ohangulayo! UNkulunkulu unobukhosi! Wenza ukwahlulela Kwakhe, futhi ubagweba ngokufa. Labo abasebandleni abanganaki ukulandela umsebenzi woMoya oNgcwele, abaphazamisa umsebenzi woMoya oNgcwele, abazigabisayo, abanezinhloso nezinjongo ezingenabulungiswa, abangafaki amandla abo ekudleni nasekuphuzeni amazwi kaNkulunkulu, abadidekile nabasolayo, abahlolisisa umsebenzi woMoya oNgcwele—amazwi okwahlulela azofika kubo noma nini. Zonke izenzo zabantu ziyokwambulwa. UMoya oNgcwele ucinga izinhliziyo zabantu ezijule kakhulu, ngakho musani ukungabi namqondo; cophelelani futhi niqaphele, ningenzi ngobumpumputhe ninodwa. Uma izenzo zakho zingalandeli amazwi Ami, khona-ke niyokwahlulelwa. Ngeke kusize ukulingisa, ukukhohlisa, noma ukungaqondi ngokwempela; kufanele uze phambi Kwami futhi ukhulume Nami kaningi.
Noma yini oyithatha ngaphakathi Kimi, iyokunika indlela yokwenza, futhi uyophelezelwa ngamandla Ami, uyoba nobukhona Bami, futhi uyohlala uhamba emazwini Ami, uyokwedlula konke ezweni, futhi uyoba namandla okuvuka ekufeni. Uma amazwi akho, ukuziphatha kwakho, nezenzo zakho kungenawo amazwi Ami nobukhona Bami, uma uziqhelisa Kimi futhi uphile ngaphakathi kuwe, uphile emicabangweni yengqondo, uphile ezimfundisweni nasemithethweni, khona-ke lokho kuwubufakazi bokuthi ubeke umqondo wakho ezonweni. Ngamanye amazwi, ulokhu ubambe ubuwena obudala futhi awuvumeli ukuba abanye balimaze ubuwena nakancane noma balimaze umphefumulo wakho; umuntu onjalo unezinga eliphansi ngokwedlulele futhi unobuwula obedlulele, futhi akakwazi ukubona umusa kaNkulunkulu noma ukubona izibusiso zikaNkulunkulu. Uyokwazi nini ukungivumela ngisebenze ngaphakathi Kuwe uma uqhubeka nokungigwema! Lapho sengiqedile ukukhuluma, uyalalela kodwa awukhumbuli, futhi uba buthakathaka ngokukhethekile lapho kukhonjwa ngempela izinkinga zakho; luhlobo luni lwesimo lolo! Ngingakuphelelisa nini uma uhlala udinga ukunxenxwa! Uma wesaba ukungqubuzeka nokuhuzuka, khona-ke kufanele uphuthume uyoxwayisa abanye, “Ngeke ngivumele muntu ukuthi abhekane nami, ngingasisusa mina isimo sami semvelo, esidala.” Ngakho akekho ongakugxeka noma akuthinte, futhi ukhululekile ukukholwa noma ngayiphi indlela oyifisayo ngaphandle kokuba khona komuntu okunakekelayo. Ungalandela izinyathelo Zami kanje? Kungamazwi angenalutho ukuthi uqinisekile ukuthi nginguNkulunkulu wakho neNkosi yakho. Uma ngempela ungenakungabaza, lezi zinto ngeke zibe yinkinga, futhi uyokholwa ukuthi uthando lukaNkulunkulu nezibusiso zikaNkulunkulu okuphezu kwakho. Lapho ngikhuluma, kukumadodana Ami, futhi kufanele kuhlangatshezwe ngokubonga nokudumisa.
Empilweni yabo, akekho umuntu owaziyo ukuthi hlobo luni lwezingqinamba azohlangabezana nazo, futhi akazi ukuthi ukulungiswa kuniazobhekana nakho. Kwa…
Njengokuba asho uNkulunkulu ukuthi, “Akakho ongaqonda umnyombo wamazwi Ami, noma ukuyiqonda injongo yawo.” Ukube bekungekhona ukuqondiswa uMoya kaNkul…